musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vanotamba Nhabvu Vanotamba Marcos Rojo Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeGenius Kudzivirirwa inonyatsozivikanwa nezita reZita reNickname; "Becho". Our Marcos Rojo Childhood Story Nhoroondo ye Untold Biography Facts inounza iwe zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yeupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye Off-Pitch Marcos Rojo Facts
Hongu, munhu wese anoziva nezvekudzivirira kwake kodzero asi vashomanana vakafunga marco yedu Marcos Rojo iyo inofadza chaizvo. Iye zvino tisingafambi mberi, ngatitangei.
Marcos Rojo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
[Zita Rakazara] Faustino Marcos Alberto Rojo akaberekwa musi we 20th waMarch 1990 muLa Plata, Argentina. Akaberekerwa Carlina Rojo amai vake naMarcos Rojo Snr baba vake. Akakurira muEl Triunfo muLa Plata, guta rakashayiwa 40 makiromita kubva kuBuenos Aires (Capital of Argentina). Iko guta rinozivikanwa nemakwikwi ayo anozivikanwa evapanduki uye vagari varo vanofarira bhora.
Nekuda kwekuita kuti akwanise kuita basa rake mune imwe nzvimbo isina kukanganisa mhosva muLa Plata, vabereki vaMarcos vakamuendesa kuEstudiantes LP kwaakanyoresa semusikana wechidiki pazera remutambo we4. Pasi pane zvinyorwa zvinoshamisa zvinyorwa zvemuviridzi anotora matanho ake ekutanga mumutambo wakanaka semwana.
Sezvo Marcos Rojo anozviisa, ... "Panguva yandakatanga kutamba nebhola, baba vangu vakanga vasina motokari. Akanga ari murombo uye kudzidziswa kwangu kwakanga kusiri pedyo neimba yedu. Saka taifanira kuenda nebhasikoro. Isu tose taifamba nebhazikoro kwenguva yakareba. Baba vangu vakashandisa kutengesa zvinhu mumugwagwa uye vaizodzoka kuzonditora kumba kumba. Yakanga iri rwendo rurefu uye ini ndaizotonhora chaizvo paanenge achitya bhasikoro rake! ". Rojo yaifanira kutenderera kuenda kunodzidziswa, rwendo rwekufamba rwemakiromita anokwana 20 kubva kumba kwake kuenda kunzvimbo yake yekudzidzira. Akaita zvibayiro zvakawanda kuitira kuti aone chiroto chake chokuva mhizha wepamusoro.
"Ndaigona kuona chido chake," akati Rojo Snr (baba vake). "Ndaigona kuzviona uye ndaigona kuzviona maari nokuti aizotevera bhora rimwe nerimwe. Akanga akagara akasiyana nevamwe vakomana vezera rake. " Vechikwata (Estudiantes) vechidiki vechidiki Gabriel San Millan vakazivawo mano aMarcos uye vakabatsira kutanga tarenda yake pachikwata chake chekutanga chechikwata. "Zvechokwadi, akanga ari mutambi akanaka," akadaro San Millan. Akaenderera mberi ..."Akanga ane unyanzvi hwakanaka uye nheyo yakanaka. Asi chinhu icho chaigara chiripo pamusoro pake chaiva chido chekugara uchiita zviri nani. Marcos Alonso kushanduka semutambi zvaishamisa. Paakanga ari 18 kana 19, akatanga kukura mumuviri.
Pakupera kwemakore ake evechiri kuyaruka, Marcos akanga atotamba achitamba neshamwari, Estudiantes, avo vari mu Argentinian First Division. Makore ekuyaruka aMarcos akaremerwa nekurwa uye akarega chikoro mangwanani. Kune zvakawanda zvekubiridzira, kurwisana uye kunyange kufa. Bhora rakanga riri muponesi wake. Aigara achiita bhora sezvo akanga ari mukomana muduku. Nguva dzose yebhola, masikati neusiku. Vakawanda, kazhinji Marcos aizoita hondo. Anotsamwa kwazvo uye ane mhirizhonga yakawandisa. Ndizvo zvinowanikwa mumigwagwa iyi. Iwe unofanirwa kuva nesimba.
Mushure mokukunda Copa Libertadores mumakore ake ekuyaruka, Marcos akatamira kuSpartak Moscow uye zvakare, Sporting Lisbon. Akanyatsoita mucherechedzo wekupedzisira kweClincour World Cup muBrazil seArgentina akafamba kusvika pakupedzisira asati atadza kupera kuGermany. Izvi zvakakonzera kudanwa kubva Man United. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Marcos Rojo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Rojo yakaroorwa naEugenia Lusardo, muenzaniso wekugadzira mairi uri kuLisbon. Vose vadikamwi vakasangana ndokudanana murudo apo Rojo aive ku Sporting CP. Eugenia sezvaaiva panguva iyoyo akanga achishanda paIngbon-based lingerie yakasimba yakanzi Dama de Copas. Ndizvo chaizvo, mudzimai wekunaka.
Vakaroorana vane mwanasikana anonzi Morena (avo vanovadaidza kuti 'More').
Upenyu hwejoko nemusikana anonyadzisa musikana Eugenia Lusardo nyika iri kure nekukura kweArginine mune varombo varrio.
The Affair: Muna December 2014, Rojo yaiva nehukama nemukadzi waakambosangana naye usiku. Akamupomera mhosva yekushungurudza uye akatora mvumo yekumisa mapepanhau achinyora zita rake munyaya. Murairo wezita rake wakasimudzwa munaEpril 2015 nekuda kwekunetseka kuti vamwe vemahombekombe vangave vachifungidzirwa nezvechiitiko chacho, asi chinoramba chiri panzvimbo yekudzivirira kusunungurwa kwezvifananidzo zveRojo.
Marcos Rojo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Bhora rakachengetedzwa Marcos kubva muupenyu mumigwagwa yakaoma yeEl Triunfo uye yakasimudza mhuri yake kubva muurombo. Pasi pane mufananidzo waMarcos uye Mummai wake, Carlina uyo anonyanya kubatsirwa neupfumi hwake nekubudirira.
Marcos Rojo Snr, anonzi 'Titi', aimbova mutambi wemamishinari naEric Cruce uye akabatsira kusvitsa mwana wake mumutambo achiri muduku. Baba vake vakangoita £ 2.50 pazuva semugwagwa-kona-churros mutengesi, izvo zvaifanira kuva zvakakwana kupa Marcos navana vake vana - Franco, nehanzvadzi nhatu - Noelia, Micaela, naSol. Pasi pane mufananidzo waMarcos uye vatatu vevakoma vake panguva yehuduku hwavo.
Mukurumbira waMarcos Rojo uye fuma yakasiya mhuri yake kudzokera kumusha ichirarama nekutya kuurayiwa. Mhosva dzekuArgentina dzatove dzarova baba vake ndokuisa bhoti kumusoro waamai vake. Imwe nhengo yechikwata yakapinda muimba yake yehuduku yakatyisidzira kuuraya hanzvadzi yake ine makore mapfumbamwe Sol naMwarison, ane makore.
Vakatarisira kuisa maoko avo kune mamwe mamiriyoni epaundi iyo yaanogara achikumbira kumashure kune vaanoda. Izvi zvakauya apo ruzivo rwake rukuru rwakanga rwuri kufarirwa nevanhu pachena ne Old Trafford cleaner. Hanzvadzi yaMarcos Franco uye hanzvadzi Noelia vakashinga vakataura pamusoro pekutya kwemhuri kuti ivo vakawirwa nekubudirira kwaMarcos mumunda
Mukubvunzurudzwa kwepamwechete neThe Sun, vakaudza kuti kubva paakazobatana na Man Utd munaAugust, mhuri yakamira kupindura musuo wavo uye yakagadzirirwa kuchengeteka. Kutaura kubva kumba kwake muLa Plata, Noelia akati: "Tinogara tichitya. Vanotitora isu nekuda kweMarcos. Vanoziva imba, munhu wose anoziva. Tinofanira kutora matanho ose uye isu
usapindura musuo kune ani zvake. Taifanira kuisa zvipfeko pamahwindo edu ose - mberi, kumashure nemasuo kumusoro. Zvine ngozi kuva mhuri yaMarcos Rojo. Asi hatisi kusiya nokuti iyi ndiyo imba yedu. " Akanga akatsamwa zvikuru nekurwiswa kwechikwata paamai vake neimba yababa kuti akaisa mufananidzo paakaunti yake ye Twitter inoratidza kuitika kwematambudziko echisimba. Munguva iyi, Marcas akatsamwa aida mapurisa kuti awane mhosva - ivo
havana kumboita - uye vakatora ku Twitter kuti vatsoropodza varwisa.
Kunyangwe apo mhuri yake yakabva kune imwe imba yavo, ivo vakaramba vachiri mumwe mufambi we
chinangwa chitsva chekutsvaga mari kubva kwavari. Zvakakosha kuziva kuti Marcos paakazobatana United muzhizha, chibvumirano chacho chakanga chakasimudzwa nekuda kwebasa-mvumo yepamutemo inokonzerwa nezvirevo zvekurwiswa muguta rake.
Marcos Rojo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Kutarisira Kurasika Mamiriro
Franco mukoma wake akati ...: "Akagara achida kuva Veron uye aizozvifungidzira kuva iye paanenge achitamba bhora mumba. Marcos anowanzogara muimba yake oga kwemazuva panguva imwechete kana boka rake rakakundwa mumutambo unokosha. Mushure mokunge Argentina yakarasikirwa neGermany muChikwata cheNyika Yenyika 2014, Marcos aisazotaura kana kuona chero munhu anenge anenge vhiki. Anogona kutsamwa kwemazuva mazhinji. Anogara akatsamwa. Panguva ino, anofanirwa kusara oga uye ipapo achadzoka akadzikama. Mushure meNdebe yeNyika, zvakamutora mazuva anenge mashanu. Anoshandura foni yake uye haatauri kune ani zvake. Asi hazvina kuitika kuManchester United, zvakadaro. "
Marcos Rojo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - The Controversy
Marcos akambomutsa kukakavara mushure mokutumira mifananidzo yemushonga wezvinodhaka Ishe Pablo Escobar pamusana peku Instagram rake nemashoko anoti: "Ndivo chete avo vainge vane nzara neni uye vakamira neni apo pandakafamba nguva yakaipa pane imwe nguva muupenyu ndichadya patafura yangu."
Marcos, paakasangana, akati nzvimbo yacho yakanga isiri huru uye yakawedzera kuti: "Ndaisa mufananidzo wacho nokuti ndaifarira shoko uye mazwi." Peharbs, he inoona nyaya yehupenyu hwaEscobar paTV uye inoda mitauro. Hazvirevi. Chaizvoizvo, anotsigira zvaakaita. Zvisinei, pasinei nokubudirira kwake, Marcos haana kukanganwa midzi yake uye anoita kuti mhuri yake yese yabatsirwe kubudirira kwake.
Izvo zvingadaro hazvina kuitika kudai akange achitevera rimwe dambudziko rake muupenyu huri 'kuimba'. Marcos aida kuva muimbi kana aisakwanisa kuva mutambi wenhabvu. Zvechokwadi, Anoimba uye kutamba pamapoka ose, zviitiko zvose zvemhuri.
Marcos Rojo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Marcos Rojo ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Marcos Rojo's Strengths: Iye ane tsitsi, unyanzvi, anonzwisisika, ane unyoro, akachenjera uye mumhanzi chaiye (Tarenda rake yekutanga pamberi pebhola).
Marcos Rojo Usine Utera: Kusakwanisa kutarisira kurasikirwa.
Chii Marcos Rojo anoda: Kuva wega, kurara, mimhanzi, rudo, kuona zvinhu uye kushambira.
Chii Marcos Rojo asingadi: Kushushikana, kutsoropodzwa, nguva yakapfuura yekudzoka kumunyengedza uye utsinye hwemarudzi ose.
Marcos ane ushamwari, saka vanowanzozviwana mune imwe boka revanhu vakasiyana. Iyewo haazvibatsiri uye anogara achida kubatsira vamwe, asingatarisiri kuita chimwe chinhu.
Marcos Rojo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Eating Banana
Marcos Rojo akapa imwe yenhau huru dzekutaura kweimwe yeManchester United 's Europa League tie naRostov - nokudya bhanana pamucheto!
Zvanga zviri Jose Mourinho's side uyo akafambira mberi kusvika kumakota-apera emakwikwi 2-1 pazvikamu zvakasiyana Juan Mata 's second-half strike. Vose mapoka evaFans vakasara vakaziviswa apo Ashley Young akaonekwa achipa Rojo bhanza rakakanganiswa kuti adye paaiva mumunda wekutamba.
Jose Mourinho akabvuma kuti kuonekwa kusina kujairika kwakauya somugumisiro wekuneta, chimwe chinhu chinogona kuita basa rinowedzera pakati pemazuva ano nekuguma kwemwaka.
Mourinho akaudza BT Sport: "Marcos akanga aneta kazhinji. Anoziva muviri wake unoda chimwe chinhu. Akangokumbira kubhanana. Izvo bhanana haisi kunyadzisa zvachose, isu tinofanira kuremekedza mamiriro ezvinhu emuviri. "
Marcos Rojo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -nyora
Njojo inogona kutotaura Chirungu, maererano nemakumbo ake emakumbo, ayo akaverengwa 'Kuzvikudza' uye 'Kubwinya'.
Iye ane zvakawanda zvakawanda zvematatu, zvakare:
Marcos Rojo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Rabona Clearance
asi kutonga neizvi 'Rabona'kusunungurwa paWhite Cup iye asina chivimbo chakasimba mudutsoka rwake rworudyi. Mark Lawrenson anopa rubatsiro rwekuti "angadai akatarisa mbongoro" kana akaiisa pasi.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nokuverenga Marcos Rojo Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.